मेसीको बेकहमको क्लबबाट खेल्ने इच्छा, बधाई दिदै भने केहिबर्ष पछि फोन गर्नु !
काठमाडौँ । लियोनेल मेसीले डेभिड बेकहमको क्लबबाट खेल्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकाको मियामीमा बेकहमले नयाँ क्लबको घोषणा गरेसँगै उनलाई बधाई दिनेक्रममा मेसीले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् । बेकहमले सोमबार साँझ आफ्नो अमेरिकाको सकर लिगको टिम मियामीमा घोषणा गरेका थिए । बेकहमको सो टिमले २०२० देखि अमेरिकन लिगमा खेल्न सुरु गर्नसक्ने बताइएको छ ।
मेसीले बेकहमलाई एक भिडियो सन्देशमा बधाई दिदै केहि बर्षपछि आफुलाई खेल्नका लागि बोलाउन अनुरोध गरेका छन् । मेसीले भनेका छन् –‘ कसलाई थाहा छ, हुनसक्छ केहि बर्षपछि मलाई फोन गर्ने छौ खेल्नका लागि’
मेसी बाहेक बेकहमलाई ब्राजिलका नेइमार, ओलापिक धावक उसेन बोल्ट, कलाकार, अभिनेता तथा गायकहरुले पनि बधाई सन्देश पठाएका छन् ।
काठमाडौँ। स्पेनिस ला लिगामा शिर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले यस सिजनको दोस्रो हार बेहोरेको छ। गएराती बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोना रियल बेटिससँग ४-३ गोल अन्तरले पराजित भएको हो। इन्जुरीपछि मैदानमा
रोनाल्डो र मेसी बिना खल्लो हुदै छ एल क्लासिको !
काठमाडौँ। स्पेनिस ला लिगामा बहुप्रतिक्षित एल क्लासिको आज हुदै छ । स्पेनिस फुटबलको इतिहासमा पछिल्लो ११ बर्षमा पहिलो पटक एल क्लासिको लियोनेल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिना हुदै छ ।
मेसी बिना बार्सिलोनाको इन्टरमिलानमाथि सहज जित
काठमाडौँ। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनाले इन्टर मिलानलाई सजिलै पराजित गरेको छ। गएराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले इन्टरमाथि २-० को सहज जित निकाल्दै अहिलेसम्म खेलेका तिनै खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ। आफ्ना